एल्डरहरू—‘हाम्रो आनन्दको निम्ति सहकर्मी’ | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओरोमो काजाक किन्यारवान्डा किर्गिज कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मले मालागासी माल्टिज मिजो मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिलिगेनोन
“तिमीहरूको आनन्दको निम्ति सहकर्मीहरू हौं।”—२ कोरि. १:२४.
‘आफ्ना भाइहरूको विश्वासको मालिक होइन’ तर ‘तिनीहरूको आनन्दको निम्ति सहकर्मी’ भएको कुरा पावलले कसरी देखाए?
एल्डरहरूले के-कस्तो तरिकामा आफ्ना भाइबहिनीको आनन्द बढाउँछन्‌?
हामी सबैले मण्डलीको आनन्द कसरी बढाउन सक्छौं?
१. कोरिन्थका भाइहरूको कस्तो खबर सुनेपछि पावल रमाए?
इस्वी संवत्‌ ५५ को कुरा हो। प्रेषित पावल बन्दरगाह सहर त्रोआसमा थिए तर तिनलाई कोरिन्थका भाइहरूको चिन्ता लागिरहेको थियो। कोरिन्थका भाइहरू आपसमा झगडा गरिरहेका छन्‌ भन्ने खबर सुनेर तिनी अत्यन्तै दुःखी थिए। त्यसैले छोराछोरीप्रति बुबाको जस्तै मायाले गर्दा तिनले उनीहरूलाई सच्याउन एउटा पत्र पठाए। (१ कोरि. १:११; ४:१५) तिनले आफ्ना सहकर्मी तीतसलाई पनि त्यहाँ पठाए अनि त्यहाँको खबर लिएर त्रोआस आउन प्रबन्ध मिलाए। कोरिन्थका भाइहरूको हालखबर सुन्न पावल तीतसलाई त्रोआसमा पर्खिरहेका थिए। तर दुःखको कुरा, तीतस फर्केनन्‌। त्यसैले पावल म्यासिडोनियातिर लागे अनि त्यहाँ तीतसलाई भेट्न पाउँदा औधी खुसी भए। कोरिन्थका भाइहरूले पावलको सल्लाह खुसीसाथ स्वीकारेको अनि तिनलाई भेट्न उत्कट इच्छा गरेको खबर तीतसले सुनाए। यो राम्रो खबर सुनेपछि पावल ‘झन्‌ धेरै रमाए।’—२ कोरि. २:१२, १३; ७:५-९.
२. (क) विश्वास र आनन्दबारे पावलले कोरिन्थका भाइहरूलाई के लेखे? (ख) हामी कुन-कुन प्रश्नबारे छलफल गर्नेछौं?
२ त्यसको धेरै समय नबित्दै पावलले कोरिन्थका भाइहरूलाई दोस्रो पत्र लेखे। तिनले यस्तो लेखे: “हामी तिमीहरूका विश्वासको मालिक होइनौं, बरु तिमीहरूको आनन्दको निम्ति सहकर्मीहरू हौं, किनकि तिमीहरू आफ्नै विश्वासले गर्दा स्थिर छौ।” (२ कोरि. १:२४) पावल के भन्न खोज्दैथिए? अनि ती शब्दहरूबाट आज एल्डरहरूले कस्तो पाठ सिक्न सक्छन्‌?
हाम्रो विश्वास र आनन्द
३. (क) पावलले “तिमीहरू आफ्नै विश्वासले गर्दा स्थिर छौ” भन्नुको अर्थ के हो? (ख) आज एल्डरहरू कसरी पावलको उदाहरण अनुकरण गर्छन्‌?
३ ख्रीष्टियनहरूसित हुनुपर्ने दुइटा महत्त्वपूर्ण गुणबारे पावलले उल्लेख गरे। ती हुन्‌—विश्वास र आनन्द। विश्वासबारे पावलले यस्तो लेखे: “हामी तिमीहरूका विश्वासको मालिक होइनौं, . . . किनकि तिमीहरू आफ्नै विश्वासले गर्दा स्थिर छौ।” कोरिन्थका भाइहरू पावल वा अरू कोही मानिसले गर्दा होइन तर परमेश्वरमाथि तिनीहरूकै विश्वासले गर्दा स्थिर भएका थिए। यो कुरा पावललाई राम्ररी थाह थियो। यसकारण पावलले आफ्ना भाइहरूको विश्वासमाथि अधिकार जमाउनुपर्ने खाँचो देखेनन्‌ अनि तिनी त्यसो गर्न पनि चाहँदैनथे। तिनीहरू सही कुरा गर्न चाहने विश्वासी ख्रीष्टियनहरू हुन्‌ भनेर पावललाई भरोसा थियो। (२ कोरि. २:३) आज पनि एल्डरहरू आफ्ना भाइहरूको विश्वास र परमेश्वरको सेवा गर्ने मनसायमा शङ्का नगरेर पावलको उदाहरण अनुकरण गर्छन्‌। (२ थिस्स. ३:४) मण्डलीको लागि कडा नियमहरू बनाउनुको साटो एल्डरहरू बाइबलमा दिइएका सिद्धान्त अनि यहोवाको सङ्गठनले दिने निर्देशनमा भर पर्छन्‌। एल्डरहरू आफ्ना भाइहरूको विश्वासको मालिक होइनन्‌।—१ पत्रु. ५:२, ३.
४. (क) पावलले “तिमीहरूको आनन्दको निम्ति सहकर्मीहरू हौं” भन्नुको अर्थ के हो? (ख) आज एल्डरहरू कसरी पावलको अनुकरण गर्छन्‌?
४ पावलले यसो पनि भने: “तिमीहरूको आनन्दको निम्ति सहकर्मीहरू हौं।” यी “सहकर्मीहरू” को थिए? कोरिन्थका भाइहरूलाई मदत गर्न पावलसँगसँगै कडा परिश्रम गर्ने व्यक्तिहरू। हामी किन यसो भन्न सक्छौं? कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पत्रमा पावलले आफ्ना दुई जना सहकर्मीबारे यसरी उल्लेख गरे: “येशू, जसको विषयमा तिमीहरूलाई हामीले प्रचार गऱ्यौं अर्थात्‌ मैले, सिल्भानसले र तिमोथीले।” (२ कोरि. १:१९) आफ्ना घनिष्ठ मित्रहरूलाई पावलले पत्रहरूमा “सहकर्मीहरू” भनी उल्लेख गरे। जस्तै:- अपोल्लस, अक्वीला, प्रिस्का, तिमोथी र तीतस। (रोमी १६:३, २१; १ कोरि. ३:६-९; २ कोरि. ८:२३) यसकारण “तिमीहरूको आनन्दको निम्ति सहकर्मीहरू हौं” भन्ने अभिव्यक्तिद्वारा पावलले आफू र आफ्ना सहकर्मीहरूले कोरिन्थीहरूलाई आनन्दित भई परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दो मदत दिन चाहेको कुरा बताइरहेका थिए। आज पनि एल्डरहरू त्यसो गर्न चाहन्छन्‌। भाइहरूलाई “आनन्दसाथ परमप्रभुको सेवा” गर्ने मदत दिन एल्डरहरू सक्दो गर्न चाहन्छन्‌।—भज. १००:२; फिलि. १:२५.
५. केही भाइबहिनीलाई कुन प्रश्न सोधिएको थियो? हामीले कुन कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ?
५ संसारका विभिन्न भागमा बस्ने केही जोसिला भाइबहिनीलाई हालै यो प्रश्न सोधिएको थियो: “एल्डरको कस्तो बोली र व्यवहारले तपाईंलाई आनन्दित भई परमेश्वरको सेवा गर्न मदत गरेको छ?” अब हामी ती भाइबहिनीको जवाफ विचार गरौं। अनि तपाईंलाई त्यो प्रश्न सोधिएको भए कस्तो जवाफ दिनुहुनेथियो, त्यसबारे सोच्नुहोस्। साथै, आफ्नो मण्डलीको आनन्दमा हामी कस्तो योगदान पुऱ्याउन सक्छौं, त्यो पनि विचार गरौं। *
“हाम्री प्रिय परसीसलाई अभिवादन छ”
६, ७. (क) एल्डरहरूले येशू, पावल र परमेश्वरका अन्य सेवकहरूको अनुकरण गर्न सक्ने एउटा तरिका के हो? (ख) भाइबहिनीको नाम सम्झँदा उनीहरू किन खुसी हुन्छन्‌?
६ एल्डरहरूले व्यक्तिगत चासो देखाउँदा खुसी लागेको कुरा थुप्रै भाइबहिनी बताउँछन्‌। एल्डरहरूले यसरी व्यक्तिगत चासो देखाउन सक्ने एउटा तरिका दाऊद, एलीहू र येशूको उदाहरण अनुकरण गरेर हो। (२ शमूएल ९:६; अय्यूब ३३:१; लूका १९:५ पढ्नुहोस्) यहोवाका यी सेवकहरूले अरूलाई नामैद्वारा सम्बोधन गरेर साँचो चासो देखाए। सँगी भाइबहिनीको नाम सम्झनु र प्रयोग गर्नुको महत्त्व पावलले पनि बुझेका थिए। एउटा पत्रको अन्तमा तिनले २५ जना भन्दा धेरै भाइबहिनीको नामै लिएर अभिवादन गरे। तीमध्ये एक जना परसीस थिइन्‌। उनीबारे पावलले यसो भने: “हाम्री प्रिय परसीसलाई अभिवादन छ।”—रोमी १६:३-१५.
७ कुनै-कुनै एल्डरलाई नाम सम्झन गाह्रो हुन्छ। तर सम्झन प्रयास गरे भने तिनीहरूले आफ्ना भाइबहिनीलाई एक अर्थमा यसो भनिरहेका हुन्छन्‌, ‘म तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छु।’ (प्रस्थ. ३३:१७) भाइबहिनीले प्रहरीधरहरा अध्ययन वा अन्य सभामा टिप्पणी दिंदा एल्डरहरूले नामैले बोलाउँदा उनीहरू खुसी हुन्छन्‌।—यूहन्ना १०:३ तुलना गर्नुहोस्।
“उनले प्रभुमा धेरै मेहनत गरिन्‌”
८. पावलले यहोवा र येशूले बसाल्नुभएको उदाहरण कसरी अनुकरण गरे?
८ अरूको प्रशंसा गरेर पनि पावलले उनीहरूप्रति चासो देखाए। यो उदाहरण अनुकरण गरेर पनि एल्डरहरूले भाइबहिनीलाई आनन्दित भई परमेश्वरको सेवा गर्न मदत दिन सक्छन्‌। आफ्ना भाइबहिनीको आनन्दको लागि प्रयास गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकै पत्रमा पावलले यस्तो लेखे: “म तिमीहरूमा निकै घमन्ड गर्छु।” (२ कोरि. ७:४) प्रशंसाका यी शब्दहरू सुनेपछि कोरिन्थका भाइबहिनीको मन खुसीले गदगद भएको हुनुपर्छ। अरू मण्डलीको पनि पावलले यसरी नै प्रशंसा गरे। (रोमी १:८; फिलि. १:३-५; १ थिस्स. १:८) रोमको मण्डलीलाई लेखेको पत्रमा परसीसको नाम उल्लेख गरेपछि पावलले यसो भने: “उनले प्रभुमा धेरै मेहनत गरिन्‌।” (रोमी १६:१२) यस्तो प्रशंसा सुनेपछि ती वफादार बहिनीको मन कत्ति आनन्दित भयो होला! अरूको प्रशंसा गर्दा पावलले यहोवा र येशूले बसाल्नुभएको उदाहरण अनुकरण गरे।—मर्कूस १:९-११; यूहन्ना १:४७ पढ्नुहोस्; प्रका. २:२, १३, १९.
९. प्रशंसा गर्दा र प्रशंसा पाउँदा कसरी मण्डलीको आनन्द बढ्छ?
९ भाइबहिनीको कदर गरेको कुरा शब्दद्वारा व्यक्त गर्नुको महत्त्व आजका एल्डरहरूले पनि बुझेका छन्‌। (हितो. ३:२७; १५:२३) भाइबहिनीको प्रशंसा गर्दा एल्डरहरूले यसो भनिरहेका हुन्छन्‌: ‘मैले तपाईंको काम याद गरेको छु। म तपाईंको ख्याल गर्छु।’ मण्डलीका भाइबहिनीहरू एल्डरहरूबाट प्रोत्साहनका दुई-चार शब्द सुन्न चाहन्छन्‌। पचास वर्ष नाघेकी एक बहिनीले यसो भनिन्‌: “काम गर्ने ठाउँमा कहिल्यै प्रशंसा पाउँदिनँ। त्यहाँ कसैलाई कसैको वास्ता छैन, प्रतिस्पर्धा मात्र छ। त्यसैले मण्डलीमा गरेको कुनै कामको लागि एल्डरले प्रशंसा गर्दा आनन्द लाग्छ, प्रोत्साहन पाउँछु! स्वर्गमा बस्नुहुने बुबा यहोवाले माया गर्नुभएको महसुस गर्छु।” दुई छोराछोरी हुर्काइरहेका एक्लो बुबाले पनि त्यस्तै महसुस गरे। हालै एक जना एल्डरले तिनको प्रशंसा गरे। यसले यी भाइलाई कस्तो असर गऱ्यो? तिनी भन्छन्‌: “एल्डरको प्रशंसाले मलाई बल दियो!” हो, एल्डरले सँगी भाइबहिनीको निष्कपट प्रशंसा गर्दा उनीहरूको मनोबल र आनन्द बढ्छ। यसले गर्दा उनीहरूले जीवनको मार्गमा हिंडिरहने थप बल पाउँछन्‌ र उनीहरू “क्लान्त हुनेछैनन्‌।”—यशै. ४०:३१.
‘मण्डलीलाई गोठालोले झैं डोऱ्याउनुहोस्’
१०, ११. (क) एल्डरहरूले नहेम्याहको उदाहरण कसरी अनुकरण गर्न सक्छन्‌? (ख) गोठालो भेट गर्दा एल्डरहरूले केही वरदान कसरी दिन सक्छन्‌?
१० एल्डरहरूले भाइबहिनीप्रति व्यक्तिगत चासो देखाउने र मण्डलीको आनन्द बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण तरिका के हो? त्यो हो, प्रोत्साहन चाहिएकाहरूलाई मदत गर्न तुरुन्तै कदम चाल्नु। (प्रेषित २०:२८ पढ्नुहोस्) यसो गर्दा तिनीहरूले परमेश्वरका पुरातन समयका विश्वासी सेवकहरूको अनुकरण गरिरहेका हुन्छन्‌। उदाहरणको लागि, केही यहूदी भाइ निराश भएको देख्दा नहेम्याहले के गरे, सम्झनुहोस्। तिनी झट्टै उठेर उनीहरूको हौसला बढाए। (नहे. ४:१४) आज, एल्डरहरू त्यसै गर्न चाहन्छन्‌। तिनीहरू आफ्ना सँगी भाइबहिनीको विश्वास बलियो बनाउन “झट्टै” कदम चालिहाल्छन्‌। परिस्थितिले दिन्छ भने तिनीहरू भाइबहिनीलाई घरैमा भेट्न गएर व्यक्तिगत तवरमा प्रोत्साहन दिन्छन्‌। गोठालो भेट गर्दा एल्डरहरूले उनीहरूलाई “केही वरदान दिन सकूँ” भन्ने इच्छा गर्छन्‌। (रोमी १:११) एल्डरहरूले कसरी यसो गर्न सक्छन्‌?
११ गोठालो भेट गर्नुअघि एल्डरहरू आफूले प्रोत्साहन दिन चाहेको व्यक्तिबारे राम्ररी सोचविचार गर्छन्‌। जस्तै: तिनले कस्तो समस्या भोग्दै छन्‌? तिनको हौसला बढाउन के भन्न सकिन्छ? तिनको परिस्थितिसित मिल्ने बाइबलको कुन पद वा व्यक्तिबारे बताउन सकिन्छ? यी कुराहरू पहिल्यै विचार गर्दा सामान्य कुराकानी नभई अर्थपूर्ण कुराकानी गर्न सकिन्छ। यस्ता भेटघाटमा एल्डरले भाइबहिनीको कुरा ध्यान दिएर सुन्नेछन्‌ र उनीहरूलाई बोल्ने मौका दिनेछन्‌। (याकू. १:१९) एउटी बहिनीले भनिन्‌: “एल्डरले ध्यान दिएर सुन्दा ढुक्क लाग्छ!”—लूका ८:१८.
अग्रिम तयारी गरेर गोठालो भेट गर्दा एल्डरहरूले “केही वरदान दिन” सक्छन्‌
१२. मण्डलीमा क-कसलाई प्रोत्साहन चाहिन्छ र किन?
१२ एल्डरहरूको प्रोत्साहन कसलाई चाहिन्छ? पावलले सँगी एल्डरहरूलाई “पूरै बगालको हेरचाह गर्नुहोस्” भनी सल्लाह दिए। हो, मण्डलीका सबै सदस्यलाई प्रोत्साहन चाहिन्छ। वफादार भई लामो समयदेखि परमेश्वरको सेवा गरिरहेका प्रकाशक तथा अग्रगामीलाई समेत प्रोत्साहन चाहिन्छ। किन? किनभने परमेश्वरसित बलियो सम्बन्ध गाँसेका व्यक्तिहरू पनि कहिलेकाहीं यस दुष्ट संसारको दबाबले गर्दा कमजोर हुन सक्छन्‌। यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेत कहिलेकाहीं मदत चाहिने कुरा बुझ्न राजा दाऊदको जीवनमा घटेको एउटा घटना विचार गरौं।
“अबीशै दाऊदलाई सहायता गर्नलाई आए”
१३. (क) इश्वी-बनोबले दाऊदलाई किन मार्नै लागेका थिए? (ख) अबीशै दाऊदलाई सहायता गर्न आउन सक्नुको कारण के थियो?
१३ राजा अभिषिक्त भएको धेरै समय नबित्दै जवान दाऊदको गोल्यतसित टक्कर पऱ्यो। गोल्यत रपाईम जातिका राक्षस थिए। दाऊद साहसी थिए र तिनले गोल्यतलाई मारे। (१ शमू. १७:४, ४८-५१; १ इति. २०:५, ८) वर्षौंपछि, पलिश्तीहरूसितको लडाइँमा दाऊदको मुठभेड अर्को राक्षससित भयो। त्यो पनि रपाईम जातिको थियो र त्यसको नाम इश्वी-बनोब थियो। (२ शमू. २१:१६, NRV) तर यस पटक भने त्यस राक्षसले दाऊदलाई झन्डै मारेको थियो। किन? दाऊद डराएकाले होइन तर तिनी साह्रै थाकेका थिए। बाइबल विवरणअनुसार “तिनी साह्रै क्लान्त भए।” तिनी थाकेको देखेपछि इश्वी-बनोबले “दाऊदलाई पक्रेर मार्नैलागेका थिए।” तर उति नै खेर “सरूयाहको छोरा अबीशै दाऊदलाई सहायता गर्नलाई आए। तिनले त्यस पलिश्तीलाई हिर्काएर मारे।” (२ शमू. २१:१५-१७) दाऊदको झन्डै ज्यान गएको थियो! अबीशैले चाल पाएर तुरुन्तै बचाउन आएकोमा दाऊद कत्ति कृतज्ञ भए होलान्‌! यस विवरणबाट हामी कस्तो पाठ सिक्छौं?
१४. (क) गोल्यतरूपी चुनौतीमाथि हामी कसरी विजयी हुन सक्छौं? (ख) बल र आनन्द नगुमाउन एल्डरहरूले कसरी मदत गर्न सक्छन्‌? उदाहरण दिनुहोस्।
१४ सैतान र त्यसका दूतहरूले अनेकन्‌ बाधाविघ्न ल्याए तापनि संसारभरि रहेका यहोवाका जनले उहाँको सेवा गरिरहेका छन्‌। हामीमध्ये कतिपयले गोल्यतरूपी चुनौतीको सामना गरेका छौं। तर यहोवामाथि पूरा भरोसा राख्दै त्यस्ता “गोल्यत”-लाई परास्त गरेका छौं। तर कहिलेकाहीं भने यस संसारबाट एकपछि अर्को गरी आउने दबाबले गर्दा कमजोर र निरुत्साहित हुन्छौं। ती अवस्थाको सामना गर्न हामीसित बल नहुन सक्छ। तर एल्डरहरूले ठीक समयमा दिएको मदतले परमेश्वरको सेवामा लागिरहने बल पाउँछौं। धेरैले यस्तो मदत पाएको महसुस गरेका छन्‌। साठी वर्ष नाघेकी एउटी अग्रगामी बहिनीले भनिन्‌: “केही समयअघि मलाई सन्चो थिएन र प्रचारकार्यमा जाँदा छिट्टै थाकिहाल्थें। एक जना एल्डरले मेरो अवस्था याद गरेर मसित कुरा गर्न आउनुभयो। बाइबलको एउटा अंशबारे हामीले प्रोत्साहनदायी कुराकानी गऱ्यौं। उहाँले दिनुभएको सल्लाह लागू गर्दा राम्रो भयो।” उनले अझ भनिन्‌: “उहाँ कस्तो जाती हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो कमजोर अवस्था याद गर्नुभयो र आवश्यक मदत दिनुभयो!” एल्डरहरू हाम्रो मायालु हेरचाह गर्छन्‌ र अबीशैजस्तै झट्टै ‘हामीलाई सहायता गर्न’ आउँछन्‌। यो कुरा थाह पाउँदा हामी ढुक्क हुन्छौं!
“तिमीहरूलाई म कति धेरै प्रेम गर्छु, त्यो तिमीहरूले थाह पाओ”
१५, १६. (क) सँगी भाइबहिनीले पावललाई किन असाध्यै प्रेम गर्थे? (ख) हाम्रो हेरचाह गर्ने एल्डरहरूलाई हामी किन प्रेम गर्छौं?
१५ गोठालोको काम गर्नु सजिलो छैन। परमेश्वरको बगालप्रतिको चिन्ताले गर्दा वा तिनीहरूलाई मदत गर्नुपर्ने भएकोले कहिलेकाहीं एल्डरहरू राती राम्रोसँग सुत्न सक्दैनन्‌ र बीचमै उठेर प्रार्थना गर्छन्‌। (२ कोरि. ११:२७, २८) तैपनि एल्डरहरू पावलले जस्तै आफ्नो जिम्मेवारी खुसीसाथ पूरा गर्छन्‌। पावलले कोरिन्थीहरूलाई यस्तो लेखे: “म तिमीहरूका निम्ति हाँसी-खुसी खर्च गर्छु र आफू पनि पूरै खर्चिन्छु।” (२ कोरि. १२:१५) पावल भाइबहिनीहरूलाई प्रेम गर्थे। त्यसैले तिनीहरूलाई बलियो पार्न तिनी पूरै खर्चिए। (२ कोरिन्थी २:४ पढ्नुहोस्; फिलि. २:१७; १ थिस्स. २:८) त्यसैकारण भाइबहिनीहरू तिनलाई असाध्यै प्रेम गर्थे।—प्रेषि. २०:३१-३८.
१६ हाम्रो हेरचाह गर्ने एल्डरहरूलाई हामी पनि प्रेम गर्छौं र तिनीहरूको प्रबन्ध गरिदिएकोमा व्यक्तिगत प्रार्थनामा यहोवालाई धन्यवाद चढाउँछौं। हामीप्रति व्यक्तिगत चासो देखाएर तिनीहरूले हाम्रो आनन्द बढाउँछन्‌। तिनीहरूले गोठालो भेट गर्दा हामी प्रोत्साहित हुन्छौं। अनि यस संसारको दबाबको कारण निराश महसुस गरेको बेला तिनीहरू हामीलाई मदत गर्न तयार हुन्छन्‌। तिनीहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौं। हो, यी एल्डरहरू साँच्चै ‘हाम्रो आनन्दको निम्ति सहकर्मी’ हुन्‌।
^ अनु.5ती भाइबहिनीलाई यो प्रश्न पनि सोधिएको थियो: “तपाईंलाई एल्डरको सबैभन्दा मन पर्ने गुण कुन हो?” अधिकांशको जवाफ एउटै थियो: “कुराकानी गर्न सजिलो।” यो महत्त्वपूर्ण गुणबारे आगामी अङ्कमा छलफल गरिनेछ।